Maalinta: Oktoobar 3, 2018
Dabeecadda Maskaxiyan ee ka timaadda Denizli Gaadiidka.
Kaqeybgalka ololaha ku-deeqidda dhiiga oo ay soo qabanqaabisay Xarunta Tabaruca Dhiigga ee Bisha Cas ee Turkiga, Denizli Metropolitan Transportation Inc. waxay sii wadaysaa aqoon-isweydaarsiga howlaheeda shaqo la’aan la'aan. Masuuliyada bulshada [More ...]
Shaqada qatarta ah ee Salihli Bus
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, kooxaha degmada Salihli si loo hubiyo qulqulka taraafikada in si nabadgelyo ah oo joogto ah loo hor istaago joogsiga istaago si looga hortago in gawaarida la dhigto oo loo kala gooyo khad huruud ah. [More ...]
Truck horeysay Turkey ee gudaha Electric: Anadolu Laanguruusalada NPR10 GOLAHA
Dhamaan R & D, nashqadeynta iyo soosaarka NPR 10 EV waxaa fuliyay Anadolu Isuzu. Iskaashiga Aselsan waxaa lagu siiyay matoorka korantada ee gaariga tikniyoolajiyad sare, iyo astaanta Turkiga ee Alt Turkishnay waxaa loo adeegsaday doorbidista batteriga. [More ...]
Karsan wuxuu ku soo bandhigay xalka baahiyaha dhaqdhaqaaqa ee warshadiisa laba warshadeed oo kuyaala Bursa wuxuuna soo bandhigay nooca korontada ee baska dheer ee 8.1 mitir magaalada Atak ee Hanover markii ugu horeysay. Kooxda Karsan R&D [More ...]
Bartilmaameedka 2023 1 Milyan Gacanta Amineur
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, 100 ee Jamhuuriyadda. Waxbarashada aasaasiga ah ee badaha hiwaayadda si lacag la’aan ah ayaa loogu siiyaa Muwaadiniinta 2023 milyan ee doonaya inay wax ku bartaan dhaqanka badda ilaa sannad-guurada aasaaska. [More ...]
War Murtiyeedka ku Saabsanaanta waajibaadka maaliyadeed ee dheeriga ah ee 25 ee dhoofinta birta iyo biraha ayaa loo beddeley go'aan Madaxweyne. Wasaaradda Ganacsiga 20 25 maaliyad dheeri ah [More ...]
Qadka wax soo saarka metrooga cusub ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa jebiyey rikoorkii abid socday. Garoonka Gayrettepe-Istanbul dhamaadka shaqada cusub ee maanta sii dhismaha line metro ah, kala jebiyey rikoorka ah ee waqtiga oo dhan ee Turkey. Ka qodista saldhiga İhsaniye [More ...]
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo Weyn İbrahim Karaosmanoğlu ayaa ka qeyb galay Golaha La-talinta Mec ”kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen Celal Ayvaz, Gudoomiyaha Qeybta Warshadaha Madaxa Bannaan ee Warshadaha iyo Ururka Ganacsatada. Guud [More ...]
Shirka World Automobile Shirkadda 4 ee Istanbul bishii Oktoobar
Magacyada hogaaminaya iyo shirkadaha hogaaminaya waaxda gawaarida ayaa ku kulmi doona Shirka Caalamiga ah ee Gawaarida Aduunka ee lagu qabtay Magaalada Istanbul 4ta Oktoobar. [More ...]
Laba Laydh Hababka Qaabbilsan ee Cusub ee Ankara mustaqbalka
Duqa Magaalada Ankara ee Magaaladda Mustafa Tuna ayaa war wanaagsan u soo diray dadka reer Ankara barnaamij TV-ga uu ka qayb qaatay. Tuna, oo ah labada caasimada Ankaray ee cusub oo ku dhawaaqday khadka metrooga. Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare Heerka Gerede
Professor Dr. Şamandar wuxuu cadeeyay in mashruuca YHT ee uu ka shaqeynayo uu soo mari doono degmadayada Gerede. Şamandar wuxuu sheegay in rakaabka ka imanaya Badda Madoow ay baska imaan doonaan Gerede ayna tegi doonaan Istanbul ama Ankara tareen kuna faahfaahin doonaan faahfaahinta mashruucan. Ankara ilaa Istanbul [More ...]
2 Gaadiidka Baska Tareenka ee Azerbaijan 41 Injured
Dalka Azerbaijan, dadka 2 ayaa la diley waxaana dadka 41 ay ku dhaawacmeen shil sababay shil tareen oo ku dhacay bas ka talaabaya isgoyska heerka. Waxaa adeegsaday Alihan Chiraliev magaalada Bine ee Baku, caasimada Azerbaijan, iyo [More ...]
Duqa magaalada Zihni Sahin: "Waxaan sii wadaynaa mashruuca 180"
Duqa magaalada Samsun Magaalo Weyn Zihni Şahin, “Gaadiidka iyo kaabayaasha, deegaanka iyo dhaqanka muuqaalka iyo dalxiiska, dhismayaasha adeegga, tas-hiilaadka bulshada, waxbarashada iyo isboortiga, biyo cabidda, bullaacadda, dayactirka qulqulka, dhirta daaweynta [More ...]
BursaRay's 2035 Ticket 40 Milyan Dollar
Qaadashada kumanaan kun oo qof maalin kasta, oo u qaadata shaqo aad u muhiim ah safarka magaalooyinka, waxaa suurtagal ah in la maamulo Bursaray iyada oo aan wax dhibaato ah mustaqbalka dhicin. Bartilmaameedka ayaa la mid ah tan metrooga ee sida aadka u koray ee Bursa ee 2035. [More ...]